eNasha.com - नेपालः एउटा राम्रो प्रयास, तर...
Home» Cinema »Review
नेपालः एउटा राम्रो प्रयास, तर...
केही दिनअघि नेपाल चलचित्रका निर्मातामध्ये एक निर्मलकुमार शर्माले भनेका थिए- हामीले त्यो प्रयास गरेका छौँ, जुन धेरैले धेरैअघि गरिसक्नु पर्दथ्यो । (हेर्नुहोस् समाचार)
सार्वजनिक प्रदर्शन गर्नुअघि विशेष प्रदर्शन गरिएको नेपाल केही प्राविधिक रुपमा त्रुटिपूर्ण देखिए पनि उठाउन खोजेका कुराहरु राम्रा छन् । तर त्यसलाई सिलसिलेवार तरिकाले राम्ररी पटकथामा नउनिएकाले यो सिनेमा राम्रो बन्न खोज्दाखोज्दै बन्न सकेको छैन ।
जस्तो कि रामकृष्ण ढकाललाई एक जना महिलाले सिनेमा सिद्धिएपछि सोधिन्, "कस्तो लाग्यो सिनेमा ?" रामकृष्णले बढो चतुर्‍याइँपूर्वक उत्तर दिए- "सिनेमाले उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ बबाल राम्रो छ ।" उनले यो भनेनन्, सिनेमा एकदम राम्रो छ । उनले यो पनि भनेनन्, सिनेमा नराम्रो छ । उनले भने, उठाउन खोजिएको विषयवस्तु निकै खँदिलो छ, राम्रो छ । हुन पनि उनका नजिकका मित्रहरुले बनाएको सिनेमालाई उनले सीधै नराम्रो भन्न पनि मिलेन ।
सिनेमामा मध्य रातमा फेरी लाउँदै हिँडेको एउटा जोगीका तीन वटा छायाँ देखिन्छन् । लाइटिङका यस्ता समस्या, बीचबीचमा पात्रहरु अचम्म तरिकाले हुने गायब र जबरजस्ती ठुँसिएका गीतका कारण जति दाँतमा ढुंगा लाग्छ त्यति नै चाहिँदोभन्दा बढी भाषण दिने पात्रहरुका कारण पनि टाउको दुख्छ । यसको अर्थ चलचित्रमा राम्रा चिज छँदै छैनन् भन्ने होइन, राम्रा चिज चाहिँ अलि बढी नै व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकाबाट सुधांशु नेपाल आइपुग्छन्, जसलाई नेपाल बारेको चासो त्यति मात्रै छ, जति अन्य साधारण व्यक्तिलाई हुने गर्दछ । तर एकाएक उनी नेपाल भ्रमणमा निस्कन्छन् । नेपाल भ्रमणमा निस्कँदा उनले केही अविष्मरणीय व्यक्ति भेट्छन् । जसमा एकअर्कालाई हानाहान र मारामार गर्ने छोराहरुकी बूढी आमा, आफूले बढी कमाएको पैसा राष्ट्रिय झण्डा बनाउन खर्चिने दर्जी, गाउँमा विकास कहिले आउला भनेर कुरिबसेका वैद्य बा, द्वन्द्वका कारण आफ्नो थातथलो रुँदै छोडिरहेका बटुवा- यस्ता अनेक पात्रहरु देखेपछि सुधांशुले समस्याको जरो के हो र को हो भन्ने खोजी गर्छन् । खोजी गर्दा थाहा हुन्छ, देशभरिमा समस्या खडा गर्ने व्यक्ति एउटै हो, त्यो हो देशको नामूद व्यापारी शान्तिप्रसाद । यो शान्तिप्रसाद त्यही व्यक्ति हो, जो सुधांशुको बच्चादेखिकै साथी पनि हो ।
गम्भीर विषयमा अब त्यहाँ गोलमाल हुन्छ, जब यी व्यापारी शान्तिप्रसादले मन्त्रीलाई समेत हकार्छन् । मानौँ, नेता जतिका सडेगलेका व्यक्ति कोही छैनन् । गाउँभरि गोलमाल मच्चिएको छ, तर के गोलमाल हो त्यो प्रष्ट्याइएको छैन । पार्टी-पार्टीबीचको द्वन्द्वका कारण देश यो अवस्थामा पुगेको हो भनिएको छ तर पार्टी स्वतन्त्र हुनुअघि मानौँ देशमा रामराज्य नै थियो भन्ने भान पारिएको छ ।
पटकथाका यस्ता अनेकन समस्याका कारण धेरै जनाले लेखेको यो चलचित्र खिचडी बन्न पुगेको छ । नेपालमा नारीहरु लुटिइन्छन्, बचाउन सुधांशु अमेरिकाबाट सीधै बालाजु आइपुग्छन् । यस्ता कमीकमजोरीले सिनेमा खल्लो बन्न पुगेको छ ।
सुधांशुको दाबी थियो, यो सिनेमा दर्शकले चाहेजस्तो बनाइएको छ किनभने यसको कथा लेखक जनता हुन् । जनतामाझ गरिएका विविध अन्तरक्रियाले यसको कथा जन्मिएको हो । यसबाट थाहा हुन्छ, नेपाली जनता कति अन्तरद्वन्द्वमा छन् । आफैँमा गोलमटोल कथा बुन्दा रहेछन् । अनि त्यस गोलमटोल कथालाई पाँच पाँच जना पटकथाकारले सिलसिलेवार बनाउनै सकेका छैनन् ।
राजेश हमाल र सुधांशु जोशी यस चलचित्रका सहायक पात्र हुन् । मुख्य पात्र त दर्जी बनेका केशव भट्टराई, वैद्य बनेका रामचन्द्र अधिकारी र नेपाल आमा बनेकी शान्ति मास्के हुन् । यी तीन पात्रको सहारामा सिनेमा टिक्न सक्यो भने यसको पैसा उठ्ला, नत्र त गाह्रै होला । अँ, जसले राजेश हमालको चिच्याहट रुचाउँछन्, तिनले पनि यो सिनेमा एक पटक चाहिँ अवश्य हेर्छन् ।
यदि म कथाकार भएको भए...
यो समीक्षा पढ्नेहरुलाई लाग्दो हो, यसरी अहिलेकै सबैभन्दा बढी आशा गरिएको सिनेमालाई चाहिँ यो पंक्तिकारले कसरी शुरु गर्दो हो ?
जस्तो 'स्वदेश'मा मोहन भार्गव गाउँ फर्किन्छ- फर्किनुको कारण चाहिँ उसको सफलता हुन्छ । घाँटीघाँटीसम्म आएको सफलतापछि के त ? 'स्याचुरेशन प्वाइन्ट' मा आएको पैसा, सफलता र नामपछि मोहन भार्गवलाई आफ्नो बाल्यकाल याद आउँछ, गाउँ याद आउँछ । यो सिनेमामा सुधांशु पात्रलाई विदेशमा के गर्छ भनेर देखाइएको छैन, न त उसको विदेश मोह नै सकिएको छ । अझ उसले त विदेशमा मान्छे जानु कति फाइदा छ भनेर प्रमाण दिइरहेको छ । यस्तो पात्रले देशभित्रको समस्यालाई बुझ्न अझै धेरै कुराहरु गुज्रिएर जानु पर्छ ।
नेपालको समस्या नेता होइनन्, जनता हुन् । सानो सानो कुराको लागि सरकारको मुख ताक्छन् । जसरी 'स्वदेश'को मोहन भार्गवले जनताले नै गर्न सक्ने विकासका कामहरुको उदाहरण दिन जरुरी थियो सिनेमामा । तर 'स्वदेश'को कपी होला भनेर अर्कै जुक्ति रचिँदा राम्रो बन्न खोज्दाखोज्दै पनि बन्न सकेको छैन सिनेमा ।
निर्माताले आफ्नो पैसा जोगाउने मेलो गरेकाले सिनेमा बन्दाबन्दै नबन्न पुगेको हो । यहाँ जसरी फाइटहरु घुसाइएको छ, खासगरी क्लाइमेक्स र सुधांशुको 'इन्ट्रोडक्टरी' दृश्य- यसले अन्य नेपाली सिनेमा र यसलाई फरक नै बन्न दिएको छैन । यसमा दुइ नायिका सञ्चिता र सज्जाको काम नै छैन । कठै ! हाम्रा नायिकाहरु !!
यति हुँदाहुँदै पनि यो पक्का छ, सिनेमाले आफ्नो लागत चाहिँ उठाउन सक्छ । तर यो कुरा अलग हो, कमाउ सिनेमा र राम्रो सिनेमामा धेरै अन्तर हुन्छन् ।
रिलिज हल्ला अभिनेता प्रविधि सेक्स समारोह सुटिङ सेलेब्रिटी पेज थ्री अभिनेत्री